Miski Cabdinuur Salal | Afrikaan I Saldhiga xalka caqabadaha | Page 2
Maalin waliba duniddaan waxaa ka dhaco cuquubooyin muuqda, qof waliba marka uu arko waa uu ka damqadaa,waxaana kamid caquuboyinka muuqda qof maskiin ah oo waxba aanan galabsan in ganacsigiisa laga kale daadidiyo asaga oo lagu eedeynaayo in uu ka dhashay reer liita!! Hadda waxaad moodaaa caquuboyinkii waa weynaa in laga waantoobay oo waa ay yaraadeen. Laakin waxaa Soo batay caquuboyin aamusan. Aqriste ma la yaabatahay caquuboyinki aaamusan ina keen aan Isla ogaanee. Hadda ka hor wiil 20jir ayaa waxa lagu yiri faaraxoow dharka ayaa ku dhaqo waxa uu ku jawaabay ” Qofka haddii aan sheego ceeb ah, haddii aan qariyana …
Calaamadaha nolosha waxaa lagu cabbiraa shaqooyinka aas aasiga ah ee jirka uu qabto. Waxaa jiro Afar calaamadood oo muhiimka ah oo ay si joogtada ah u kormeeraan bixiyaasha daryeelka caafimaadku waxayna kale yiihin : • Heel-kulka jirka ( Temprature). • Cadaadiska dhiigga (Blood pressure). • Wadnaha garaaca (Pluse) iyo • Neefsashada ( Respiration). Calaamadahaani waxay waxtar u leeyihiin ogaanshaha ama la socodka dhibaatooyinka caafimaad. Waxaa lagu cabbiri karaa goobaha caafimaad, guriga, iyo meel kasta ay ka dhacdo xalaad caafimaad daro oo dag-dag ah. Waxaa cabbiri karo qof waliba oo aqoon u leh, waana muhiim in uu qof waliba barato. Heel-kulka …
Qof waliba oo ku nool duniddaan waxaa uu jecel yahay in uu noqdo qof caqli badan. Shaqooyinka muhiimka ah ee caqliga uu noo qabto waxaa kamid ah: Xasuusta mida gaaban iyo mida dheer, Xalinta caqabadaha nolosha, Qiimeynta qofka, Garashada shaqsiga ah, Qorsheynta mustaqbalka, Fahamka waxbarashda iyo Go’aan wanaagga. Caqliga badnaanta waa deeq Alle bixiyo, sidoo kale waxa ay kamid tahay wax-yallaha dadaalka lagu gaari karo. Soomaalida waxa ay ku maahmaahdaa: “ Caqligaada oo yar aamus baa lagu kaashadaa”. Caqliga wax-yaallaha kordhiyo waxaaa kamid: Nuujinta Naaska waxa uu qeyb lixaad leh ka qaataa kobac caqliga caruurta. • Barashada wax cusub, waxa …
Sanduuqa codka ee Afka qalaad loo yaqaano (larynx), waxa uu ka kooban yahay carjow, murqo iyo xuub ku yaallo dusha sare ee dhuunta iyo salka carrabka. Dhawaqa codka waxaa la sameeyaa marka ay fiilooyinka codka ay gariiraan. Gariirku wuxuu ka yimaadaa hawo ka soo dhaqaaqdo dhanka sanduuqa codka (larynx), oo isu keenaya filooyinka codku si ay isugu soo dhowaadaan. Haddii filooyanka codku ay caabuq yeeshaan ama ay cuuryaamaan, si sax ah uma shaqeyn karaan oo waxaa laga yaabaa inaad yeelato cilad xagga codka ah. Cuduradda Codka Wax-Yeelleyo Waxaa Kamid Ah: Hergabka. Caabuqa ku dhaco dhuunta. Burada ka soo baxdo dhuunta. …
Ibidda waxa ay canugga siisaa nafaqo,waana halka uu ka neefsado inta uu ku jiro ilma galeenka. Ibiddu waxa ay darbiga ilma-galeenka kasoo fuqdaa marka uu canugga dhasho ka dib. Mararka qaar ibiddu waxay kasoo fuqdaa darbi ilma galeena inta ay Hooyada Uurka leedahay. 1000kii Hooyo ee uur leh 9 kamid ah ayaa lagu arkaa karaa. Badanaa Hooyada waxaa lagu arkaa marka uu uurkeeda uu maraayo 24 isbuuc ama 6 bil, mararka qaarna waxaa lagu arkaa bilaha dambe ee uurka sida bisha 8aad ama bisha 9aad . Calaamadaha Kasoo Muuqda Hooyada Uurka Leh Marka Ay Ibidda Soo Fuqdo Waxaa Kamid Ah: …
Beerka waa xubinta ugu weyn xubnaha ku jira caloosha. Jirkana waxa uu u qabtaa shaqooyin aad muhiim waxaana kamid ah: Waxa uu shiidaa duxda. waxa uu jirka kale dagaalamaa infekshannada soo weeraro. waxa uu xukumaa xinjireynta dhiigga. Waxa uu burburiyaa daawoyinka. Waxa uu jirka u keydiyaa sokorta. Beerka waa xubinta kali ah oo dib usoo dhalato qalniinka ka dib, haddii aad qeyb kamid ah beerkaaga aad qof ugu deeqdo. Waxaa Jiro Cudurdo Ku Dhaco Beerka Oo Weyneyo Waxaana Kamid Ah: Cudurada ku dhaco beerka. Kansarka dhiigga. Infekshanka ku dhaco beerka. Kansarka beerka. Cuduro uu qofka ku dhasho. Wadnaha iyo xididiisa …
Wadno garaaca badan waxa uu kamid yahay cudurada ugu caansan ee ku dhaco wadnaha, waana marka uu garaaca wadnaha ka bato daqiiqaddii 100mar. Halka laga rabo qofka caafimaadka qabo garaaca wadnihiisa in uu noqdo inta u dhexeyso 60-100 mar daqiiqadii. Sida caadiga ah qofka marka uu sameeyo jimicsi ama uu xanuunsado waxaa bato garaaca wadnihiisa, taasina laguma tirin karo xaaladaha caafimaad daro ee ku imaado wadnaha. Wadnahaagu wuxuu ka kooban yahay afar qol – laba qol oo sare (atria) iyo laba qol oo hoose (ventricles). Garaaca wadnahaaga waxaa sida caadiga ah u xakameeya hawo-mareen dabiici ah oo loo yaqaan ‘sinus …
Sareedo waxa ay aheyd gabar dhammeysay dugsiga sare ee waxbarshada. Sida caadiga ah ardayda marka ay dhammeeyaan dugsiga sare waxa ay billaabaan daraasadda Jaamacadda. Aradaydii ay Sareedo isla dhammeeyeen dugsiga sare waxa ay Jaamacado u kale aadeen Caasimadaha kala ah: Muqdisho, Khartuum, Ankara iyo Qaahira. Hooya Axado waxa ay dhaxda u xiratay sida ay gabadheeda Sareedo ay oga dhowri lahayd ciil iyo cuqdad waliba.Waxayna go’aanstay inay u dirto Caasimada Soomaaliya si ay daraasadda Jaamacadda halkaa uga dhigato. Hooya Axado waxay aheyd mid ka shaqeyso maqaayad, waxayna tiir iyo tacab ku bixin jirtay sidi ay gabadheeda wax u baran lahayd. Qarashaadka …
Caabuqa ku dhaco minidhicirada waxaa sababo infekshanka ku dhaco habdhiska dheefshiid. Habdhiskaan waxa uu mas’uul ka yahay bur-burinta cunnada iyo qashin saarka jirka, waxa uuna kasoo billowda afka asaga oo ku dhammaado malawadka ama saxara saarka. Caabuqaha ku dhaco mindhicarada aad ayuu u xanuun badan yahay mararka qaarna nolosha ayuuba halis galin karaa. Maxaa Sababo Caabuqa Ku Dhaca Mindhicirada? Dhaxal ahaan in uu kuugu imaado, waxa uu kamid yahay cudurada lakale dhaxlo, sida haddii uu waalidkaa qabo caabuqaan in uu adigana kugu dhaci karo. Unugyada difaaca jirka waxay caan ku yihiin inay jirka ka difaacan bakteeriyo ama fayrus marka uu …
Xaniinyuha waxa ay leeyihiin kiish kasoo mararka qaar ay galaan biyo.10% waxaa lagu arkaa caruurta yar. Ragana da’kasta oo ay jiraan waa lagu arki karaa. Badanaa waxaa lagu arkaa ilmaha dhasho waqtigooda kahor( premature-baby) sida ilmaha ku dhasho7 bil, ayada oo ay ugu wacantahaya in bilaha ugu danbeeya ee Uurka inay xaniinyaha canugga ay kasoo dagaan gidaarka caloosha ayagoo soo galaayo kiishka uu Allah subxaanahu watacallaa ugu talagalay. Inta lagu guda jira hormarka iyo soo digitaanka xaniinta haddii uu ilmaha dhasho ama uu banaanka ugu soo baxo ilma galeenka waxa ay keeni kartaa xaniinyaha in biya galaan. Malahan wax xanuun ah. Ilmahana …